Global Voices teny Malagasy » Fahalalahana an-gazety ao Jammu sy Kashmir: resadresaka nifanaovana tamin’ilay mpanao gazety Anuradha Bhasin · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Marsa 2021 3:57 GMT 1	 · Mpanoratra VideoVolunteers Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, India, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fampandrosoana, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zon'olombelona
Anuradha Bhasin, toniandahatsoratra mpanatanteraka ao amin'ny gazety Kashmir Times. Pikantsarin'ny VideoVolunteers tao amin'ny horonantsary YouTube.
Niseho voalohany tao amin'ny Video Volunteers , fikambanana iraisam-pirenena nahazo loka tamin'ny fampahalalam-baovaom-piarahamonina tao India ity lahatsoratra ity. Navoaka eto ny dika nasiam-panovana noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tamin'ny resadresaka nalefa ny 11 Febroary, niantsafa tamin'i Anuradha Bhasin, tonian-dahatsoratra mpanatanteraka ao amin'ny gazety Daily Kashmir Times  ilay mpampita vaovaon'ny VideoVolunteers Basharat Amin , mba hamantarana ny zava-misy ankehitriny momba ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ao Jammu sy Kashmir .
Tamin'ny 5 Aogositra 2019, nanafoana ny andininy faha-370  amin'ny lalàmpanorenan'i India izay manome ny sata fizakan-tena manokana ho an'ny fanjakana ifandirana Jammu sy Kashmir ny governemanta ao India, notarihan'ny Antoko Bharatiya Janata (BJP ). Mpitondra politika  an-jatony no niharan'ny tsy fahafahana mivoaka ny trano, ary naato  ny fidirana amin'ny tambajotra finday, ny laharana an-tariby ary ny tambajotra aterineto. Nasiana sakana teny an-dalambe satria nampiharina ny famerana mivezivezy ary notanana  izay rehetra nanao fihetsiketsehana.
Vakio ny fitantarana manokana: Inside Kashmir's crisis 
Ato amin'ity antsafa ity, niresaka (amin'ny teny anglisy) momba ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety nandritra ny taompolo 90  i Bhasin, rehefa nanomboka ny fitolomana  manohitra ny fitondrana Indiana tao amin'ny lohasaha, sy ny zava-misy ankehitriny izay nanilihana ny andininy faha-370 sy ny fanesoran'ny governemanta ny fanakanana ny aterineto 4G rehefa afaka efa ho 18 volana .
Niasa tamin'ny iray amin'ireo gazety tranainy indrindra ao Jammu sy Kashmir i Anuradha Bhasin . Mpanohana matanjaka ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety izy ary nalaza tamin'ny vaovao noho ny fitsikerany ny governemantan'i Modi . Nangataka tamin'ny Fitsarana Tampony izy ny hanafoanana ny famerana ny serasera izay napetraka taorian'ny fanafoanana ny andininy faha-370 tao Jammu sy Kashmir. Noho ny fangatahana nataony  no namerenan'ny  Governemantan'i India tamin'ny laoniny ny tolotra aterineto 2G tao amin'ny faritra mihidy ao Kashmir.
“Nijanona tsy namoaka vaovao manakiana ny governemanta ny gazety eo an-toerana,” hoy i Bhasin raha niresaka momba ny fanaraha-maso sy ny fandrahonana ny mpanao gazety avy amin'ny fitondrana izy. Nampatsiahy ny mpanao gazety momba ny andraikitr'izy ireo amin'ny maha-feon'ny vahoaka azy izy, indrindra ireo izay iharan'ny tsindry sy voahilikilika.
Nifantoka ihany koa tamin'ny politika vaovaon'ny fampitam-baovao  noforonina tao Kashmir ny antsafa izay toa hita fa natao hanoherana ny fiparitahan'ny fandisoam-baovao na ny vaovao faikany. “Rehefa manomboka manaparitaka vaovao faikany ny fantsom-pahitalavitra dia tsy misy fepetra raisina amin'izy ireo satria manohana ny governemanta mpitondra ny sasany amin'ireo zava-mitranga ireo,” hoy i Bhasin.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/03/16/151755/
 Video Volunteers: https://www.videovolunteers.org/democracy-is-power-of-the-people-not-of-those-ruling/
 andininy faha-370: https://en.wikipedia.org/wiki/Article_370_of_the_Constitution_of_India
 Mpitondra politika: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49230883
 Inside Kashmir's crisis: https://globalvoices.org/specialcoverage/2020-special-coverage/inside-kashmirs-crisis/
 nandritra ny taompolo 90: https://thewire.in/media/how-free-is-the-media-in-the-kashmir-valley
 rehefa afaka efa ho 18 volana: https://techcrunch.com/2021/02/05/india-is-restoring-4g-internet-in-jammu-and-kashmir-after-18-months/#:~:text=India%20is%20restoring%204G%20internet%20services%20in%20Jammu%20and%20Kashmir,decision%20to%20revoke%20Kashmir
 Nangataka : https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/bhasin-v-union-of-india/
 fangatahana nataony: https://indiankanoon.org/doc/82461587/
 namerenan'ny : http://Inside Kashmir
 politika vaovaon'ny fampitam-baovao: https://www.theleaflet.in/media-policy-2020-mocking-freedom-of-speech-and-expression-in-jammu-and-kashmir/